Ripple Tafura Yekofi - Dhizaini magazini
Tafura Yekofi Tafura yepakati yaishandiswa kazhinji inoitika pakati penzvimbo uye inokonzeresa nematambudziko edanho. Neichi chikonzero, matafura ebasa anoshandiswa kuvhura iyi gidhi. Kuti agadzirise dambudziko iri, Yılmaz Dogan akabatanidza mabasa maviri mukugadzirwa kweRipple uye akagadzira simba rekugadzira dhizaini iro rinogona kunge riri mbiri yepakati uye tafura yebasa, inofamba neruoko rweasymmetric uye inofamba chinhambwe. Uku kusimba kwesimba kwakabatana neRipple yemvura dhizaini mitsetse inoratidza kubva kune zvakasikwa nekusiyana kweadonhwe uye mafungu akaumbwa nekudonha uku.
Zita rechirongwa : Ripple , Vagadziri zita : Yılmaz Dogan, Izita remutengi : QZENS Furniture & Design.
QZENS Furniture & Design
Fenicha, zvinhu zvekushongedza uye dhizaini yepamhepo
Tafura Yekofi Yılmaz Dogan Ripple